I-Abraxas kunye neMimoya yeOlimpiki-Ihlabathi leAmulets
Awona makhubalo anamandla esakha sawenza kukudityaniswa kweMimoya yeOlimpiki kunye neminye iMimoya kwaye phakathi koku kudityaniswa ne-Abraxas kungaphaya kwayo nayiphi na enye into esiyidalileyo. Amandla adibeneyo eMimoya ye-Olimpiki ye-7: I-Och, i-Aratron, i-Bethor, i-Phul, i-Ophiel, i-Hagith kunye ne-Phaleg iyakwazi ukwenza utshintsho olubaluleke kakhulu kuzo zonke iinkalo zobomi bakho. La makhubalo, imisesane kunye nezikhonkwane zomlingo zelapel zincede abantu abaninzi abaneengxaki zemali, imiba yothando, ukhuseleko kunye nokuphiliswa. I-amulet ye-Abraxas, iringi okanye ipini nazo ziyaziwa ngokunyusa amandla eminye imimoya. Ukuba uzidibanisa nalo naluphi na olunye uhlobo lwe-amulet, iziphumo ziyakhawuleza kwaye zinamandla ngakumbi
I-Ring ye-Abrasax okanye iRingi kaSolomon yenye yezona zinto zidala zakudala kwaye isesezenye ezinamandla. Le ring inamandla okutshintsha ubomi bakho kwaye iguqukele kubomi obuhlala ubunqwenela. Ngapha koko ndinxiba lo umsesane ngokwam 24h / ngemini kwaye iziphumo ziye zanomdla. Esi sisongelo sikhethekileyo sinezinto ezindala kakhulu ezixhonyiweyo eziphantse zaphulukana nolwazi lomntu.
Iinkosi ezininzi zeReiki zisebenzisa le ringi ukuphilisa njengoko zifumana ulwazelelelo olongeziweyo kunye nokongezwa kwamandla ukuze kuxhamle inkosi kunye nomamkeli. Kodwa esi sisiqalo nje samandla alo msesane. Iisimboli ezisi-7 kumsesane zimela iMimoya ye-Olympian esixhenxe. Ngamnye kubo umoya wamandla amakhulu. Baziwa kancinci kodwa balapha ukuze bakunike iminqweno yakho. Indibaniselwano yale mimoya i-7 iya kwenza ukuba ukwazi ukugcwalisa yonke iminqweno yakho. Banokukusebenzela ngokwahlukeneyo okanye kunye.
Iringi yomlingo kunye nemimoya esi-7 yokuphucula ubomi bakho
Ukutshaja, ukucoca kunye nokulungelelanisa iPad yabasebenzi bamandla
Ayisebenzanga - €35 Isebenze - €55
Ophakamileyo uPendant we-Abraxas ukulawula ubomi bakho kunye nokufezekisa yonke into oyifunayo
I-Amulet yoMbala oPhakamileyo ayisetyenziswanga - €32 I-Amulet yoMbala oPhezulu iyasebenza - €42
I-Enamel - €19
Ukuqaliswa kwaMandla oMlingo we-Astaroth
Ukuqaliswa kwaMandla oMlingo weAsmodeus
Ukuqaliswa kwaMandla oMlingo kaMammon
Ukuqaliswa kwaMandla oMlingo kaLusifa